Mayelana NATHI | URuian Honetop Machinery Co., Ltd.
URuian Honetop Machinery Co., Ltd.
I-HONETOP MACHINERY uneminyaka engu-14 enolwazi kusukela ngo-2002 kulayini wokupakisha. Sinikeza isisombululo sokupakisha esiphumelelayo sazo zonke izinhlobo zomkhiqizo ebhokisini lebhokisi nakumaphakethe wesikhwama. Njengomshini we-cartoning othomathikhi, umshini wokupakisha ibhokisi lekhathoni lokudla, umshini wokupakisha ibhokisi lezicubu zamaphepha, umshini wokuthwala ibhokisi, umshini we-bulb cartoner, ogcwalisa futhi uvale umshini webhokisi, i-cartoner yezitsha, i-sachet, amabhodlela, ithubhu, induku ... unomshini wokupakisha wesikhwama, umshini wokwenza iphepha ngotshani nokunye.
Uhlelo lokuklama ngokwezifiso. Siyakwamukela uxhumane nathi ngemininingwane yomshini. Le nkampani isidlulile isitifiketi sohlelo lwekhwalithi esezingeni lomhlaba jikelele le-ISO900, isitifiketi se-CE, isitifiketi se-UL. Imishini engama-95% ithunyelwe emazweni angama-50, kufaka phakathi i-USA, Canada, Chile, Mexico, Spain, Dominica, Venezuela, Russia, Turkey, Morocco, Jamaica, Nicaragua, Colombia, Middle East ...
Ngoba kunemiqondo edidiyelwe yokuqamba, ikhwalithi yomkhiqizo omuhle kakhulu nensizakalo esebenza kahle yokuthengisa ngemuva, ithengisiwe esifundeni inethonya elihle, futhi ithole ukunconywa kwamakhasimende.
Kube "ukuqinisekiswa kwekhwalithi, insizakalo yobungcweti, ukwaneliseka kwamakhasimende"
ngenhloso yokuphatha, "ukuba nenhliziyo enhle nobulungiswa kuqala, inzuzo yesibili, insizakalo eyisisekelo" yefilosofi yebhizinisi. Ukugcina umoya wokuphayona, ukwenziwa kwezinto okuthuthukayo, nokwenza abakhiqizi abasezingeni eliphakeme, ukuze amakhasimende ethu azuze ngempela enkonzweni yethu.
Ithimba, ukuqamba izinto ezintsha, ukuzinikela, nobuqotho 'yizidingo eziphelele zenkampani nazo zonke izisebenzi. Siyiqembu nenhlangano enezinhloso. Ubumbano kanye ne-pragmatism yizidingo eziyisisekelo zale nhlangano, kanti ukuqamba kuyinjongo Inhloso yeqembu. Ngakho-ke, emsebenzini oyisisekelo, kufanele sicabange ngendawo eyodwa, sisebenze kanzima endaweni eyodwa, siphenduke intambo, sifune iqiniso kumaqiniso, futhi senze umsebenzi wehlele emhlabeni. Ngokufunda nangokuqaphela, "sizokwenza konke okuhambisana nentuthuko yenkampani, konke okuvumelana nobunye benkampani, nakho konke okulungele ukukhuphula imali nokunciphisa izindleko" ukufeza isikhathi eside senkampani intuthuko.